मलायबाट अ Translation्ग्रेजी अनुवाद – Vocre
Need an online translator for Malay and English? हामीले तपाईंलाई कभर गर्यौं!
भोक्रेको अनलाइन अनुवादक अनुप्रयोगले मलयाईबाट अंग्रेजी अनुवादका साथै दर्जनौं अन्य भाषाहरूको लागि अंग्रेजी अनुवाद सेवाहरू प्रदान गर्दछ. हाम्रो उपकरण प्रयोगकर्ता मैत्री छ र दुबै पाठ अनुवादको साथै भ्वाइस-टु-टेक्स्ट इनपुट प्रदान गर्दछ, त्यसैले तपाईं ध्वनि संग अंग्रेजी देखि मलय को लागि अनुवाद प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ. मलाय र दर्जनौं अन्य भाषाहरू अनुवाद गर्नुहोस्.
मलयाई स्पिकरहरू संसारभर
तपाईंलाई किन मलय अनुवाद अनुप्रयोग चाहिन्छ? त्यहाँ लगभग छन् 290,000,000 संसारमा मलय वक्ताहरू. यो व्यापक रूपमा बोलेको छ 12 दक्षिणपूर्व एशिया र बाहिरका देशहरू, र त्यहाँ अरू पनि छन् 25,000 संयुक्त राज्य अमेरिकामा बस्ने मलेसियनहरू. and tens of thousands in Europe and other areas.
को मलय भाषा हाल व्यापक रूपमा बोल्दछ 12 देशहरू (यद्यपि यो धेरै अन्यमा साना समुदायहरूमा पनि बोलेको छ). को 12 यो भाषा सबैभन्दा लोकप्रिय भएको देशहरूमा मलेसिया समावेश छ, इन्डोनेसिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, फिलिपिन्स, म्यानमार, थाईल्यान्ड, कोको टापु, क्रिसमस टापु, श्रीलंका, सुरिनाम, र तिमोर.
हाम्रो उपकरणले सहि र सटीक अनुवाद प्रदान गर्दछ. यसले दुबै अनुवादक अनुप्रयोग र शब्दकोश को रूपमा काम गर्दछ र हो more accurate than most — धन्यवाद हाम्रो स्वचालित अनुवादक सुविधा. एउटा उपकरण खोज्नुहोस् जसले ध्वनिको साथ अंग्रेजीबाट मलय अनुवाद गर्दछ, preferably.
हाम्रो नि: शुल्क अनलाइन अनुवादक पनि भाडामा लिन भन्दा कम महँगो छ वाणी अनुवाद सेवा वा अंग्रेजी भाषा को लागी व्यावसायिक अनुवादक (प्लस, तपाईं आफ्नो खल्तीमा अनुवादक राख्न सक्नुहुन्न!).
हाम्रो अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस् गुगल प्ले एन्ड्रोइड वा को लागी एप्पल स्टोर IOS को लागी.
म अंग्रेजीलाई मलयमा कसरी अनुवाद गर्न सक्छु?
भोक्रेको अनुप्रयोगले मलय शब्दहरू अनुवाद गर्दछ, वाक्यांशहरु, र अ ​​into्ग्रेजीमा वाक्य. भ्वाइस-टु-टेक्स्ट छनौट गर्नुहोस् वा अनुप्रयोगमा सिधा टाइप गर्नुहोस्. तपाईंले मलाय-देखि-अंग्रेजी पाठ अनुवाद वा यसको विपरीत चयन गर्न सक्नुहुन्छ (वा ध्वनि संग अंग्रेजी देखि मलय चयन गर्नुहोस्). मलय-देखि-अंग्रेजी अनुवाद जति गाह्रो नहुन सक्छ अंग्रेजीबाट फारसी वा अंग्रेजी देखि खमेर अनुवाद.
मलायबाट अ Translation्ग्रेजी अनुवाद: स्पिच-टु-टेक्स्ट फिचर
हाम्रो स्पिच-टु-टेक्स्ट प्रयोग गरेर अ to्ग्रेजीमा अनुवाद गर्नुहोस् (आवाज इनपुट) सुविधा. केवल शब्दहरू भन्नुहोस्, वाक्य, वा वाक्यांशहरू अनुप्रयोगमा, र उपकरणले तपाईंको शब्दहरूलाई पाठमा परिवर्तन गर्दछ. यो भाषाहरू अनुवाद गर्न को लागी एक सजिलो तरीका हो - समय बर्बाद नगरी. सबै भन्दा राम्रो भाग? यो मलय अनुवादकहरू राख्नु भन्दा सस्तो छ.
भाषा पहिचानकर्ता सुविधा
हाम्रो उत्कृष्ट सुविधाहरू मध्ये एक हाम्रो भाषा पहिचानकर्ता हो. अंग्रेजीमा टाइप गर्नुहोस् र मलाइ पाउनुहोस्. सहि भाषा रोज्ने बारे चिन्ता लिनु पर्दैन (विशेष गरी मलयाई टाइप गर्न को लागी एक सानो मुश्किल हुन सक्छ). हाम्रो अनुप्रयोग तपाईंको लागि कडा परिश्रम गर्दछ. यो उपकरण प्रयोग गर्न तपाईंलाई तपाईको फोनमा मलय किबोर्ड पनि आवाश्यक छैन.
हामी यात्रु र समुदायलाई मद्दतको लागि अफलाईन मोड पनि प्रस्ताव गर्दछौं वाईफाईमा लगातार पहुँच बिना नै अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस् जब तपाईंसँग वाइफाइ जडानमा पहुँच हुन्छ।, and the features will still be available while you’re offline.
Vocre ले हाल मलाय भ्वाइस आउटपुट वा अङ्ग्रेजीबाट मलयलाई ध्वनिसँग समर्थन गर्दैन — तर हामी यसमा काम गरिरहेका छौं!
हाम्रो मुख्य लक्ष्य मध्ये एकले अन्डररवेड समुदायलाई भाषा अनुवाद सफ्टवेयरमा पहुँच गर्न मद्दत पुर्‍याइरहेको छ. यदि तपाईंको भाषा हाम्रो अनुप्रयोगमा छैन भने, कृपया हामीलाई जानकारी दिनुहोस्! हामी लगनशील भई काम गरिरहेका छौं कि सबै अनुप्रयोगहरू हाम्रो अनुप्रयोगमा समान प्रतिनिधित्व पाउँछन् भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्न.
के तपाईंसँग अन्य अनुवाद अनुप्रयोगहरू छन्?
हाम्रो मलय देखि अ translation्ग्रेजी अनुवाद अनुप्रयोग दर्जनौं भाषाहरू अनुवाद गर्न एक स्टप-शप हो! टाइपिंग इनपुट उपकरण हाम्रो अनुप्रयोगमा एक सबै भन्दा लोकप्रिय सुविधाहरू मध्ये एक हो (यो मलय शब्दकोशबाट अंग्रेजीमा शब्द अनुवाद गर्न सजिलो बनाउँदै) र एक अंग्रेजी अनुवादक अनुप्रयोग भित्र भुक्तान अपग्रेडको रूपमा समावेश गर्दछ. समर्थित अन्य भाषाहरू जाँच गर्नुहोस्, पनि.
अन्य भाषाहरू समर्थित
हाम्रो मलयबाट अंग्रेजी अनुवादको अतिरिक्त, हाम्रो अनुप्रयोगले भाषाहरूलाई समर्थन गर्दछ, जस्तै:
सिक्नुहोस् नयाँ भाषाहरू सिक्नका लागि सल्लाहहरू जस्तै सामान्य वाक्यांशहरू कसरी अन्य भाषाहरूमा नमस्ते भन्न.
केहि भाषाहरूको लागि, तपाईं बोलीएको शब्दहरू र वाक्यांशहरूलाई भाषामा अनुवाद गर्न सक्नुहुनेछ र ठूलो स्वरले बोलेको अनुवाद सुन्नुहुनेछ; अन्य भाषाहरूको लागि, हामी हाल पाठ अनुवाद मात्र प्रस्ताव गर्दछौं. यदि तपाइँ ध्वनि संग अंग्रेजी देखि मलय खोज्दै हुनुहुन्छ, चाँडै फिर्ता जाँच गर्नुहोस्!